Exquisite Box Printing ၏ထူးခြားချက်များ?
လက်ရှိအချိန်မှာ, ကွမ်ကျိုးတွင်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းစက်ရုံများစွာရှိသည်. လက်ရာမြောက်လှသောလက်ဆောင် boxeshas သည်အထွေထွေပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တူညီသည်, ထုပ်ပိုးအရောင်သေတ္တာများအဓိကအားထုတ်ကုန်များ၏ထုပ်ပိုးဖို့လျှောက်ထားကတည်းကကတည်းက, အသွင်အပြင်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပုံစံမျိုးစုံရှိရလိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်, အရောင် box ပုံနှိပ်ခြင်းကပိုမိုကွဲပြားခြားနားပြီးရှုပ်ထွေးပုံပေါ်လိမ့်မည်။ …
မှို box ကို၏ပြproblemနာ၏ပြော, လက်ဆောင်သေတ္တာနဲ့ပြaနာရှိနေတယ်, ပုံသွင်းနည်း, မှိုတားဆီးဖို့လက်ဆောင်သေတ္တာအောင်ဘယ်လို, နှင့်စက္ကူ box ကိုမှိုဖို့လွယ်ကူအောင်ဘယ်လို. ပထမ, ငါတို့လက်ဆောင်သေတ္တာမှိုသည်အဘယ်ကြောင့်အချို့အကြောင်းပြချက်အကျဉ်းချုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်:…
စားသုံးသူစိတ်ပညာသုတေသနအရစားသုံးသူများသည်ကုန်ပစ္စည်းများမ ၀ ယ်ခင်နှင့်အပြီးရှုပ်ထွေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်သည်, နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု, ကျားမ, အလုပ်အကိုင်, လူမျိုးစု, ပညာရေးအဆင့်, လူမှုပတ်ဝန်းကျင်, စသည်တို့, ကွဲပြားခြားနားသောစားသုံးသူအုပ်စုများနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာတူညီသောစားသုံးသူစိတ်ပညာသို့ခွဲခြားထားတယ်. Guangzhou Huaisheng ထုပ်ပိုးမှု၏စစ်တမ်းရလဒ်အရ,.co …
Gift Box ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအာရုံစိုက်ပါ
လက်ဆောင်သေတ္တာသည်အဓိကရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆွေမျိုးများနှင့်မိတ်ဆွေများလက်ဆောင်အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသောလက်တွေ့ကျသောလက်ဆောင်အထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်ထုပ်ပိုးနည်းလမ်း၏ function ကို၏လူမှုရေးလိုအပ်ချက်တစ်ခု extension ကိုဖြစ်ပါတယ်. လက်ဆောင်သေတ္တာသည်နှလုံး၏အထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်ထားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်…
စက်ရုံမှထွက်သောဓာတ်ငွေ့ကုသမှုပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်မည်သည့်အရည်အသွေးသည်ကောင်းမွန်သည်? 1.ထုတ်လွှတ်သောဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်ပစ္စည်းများချောဆီထုတ်ကုန်တွင်အရည်အသွေးမြင့်စစ်ထုတ်စက်နှင့်ချောဆီပစ္စည်းများသန့်ရှင်းစေရန်အတွက်လေဟာနယ်ထိရောက်မှုရှိသင့်သည်။. ချောဆီ၏ပြန်လည်သုံးသပ်စဉ်းစားပါ. 2.ချောဆီပစ္စည်းများ၏ယူနီဖောင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ရေးသေချာနိုင်ပါတယ်, ဘယ် ...
ကုတ်အင်္ကျီ. စက္ကူအပေါ်ယံပိုင်းသည်စက္ကူ၏ပုံပျက်သောအခြေအနေကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်. သို့သော်, စက္ကူ coated နှင့်တ ဦး တည်းဘက်မှာအခြောက်နေသည်ပြီးနောက်, ဖိုင်ဘာနှင့်ရေမော်လီကျူး၏ချိန်ခွင်လျှာစနစ်ဖျက်ဆီးခံရသည်, အရာစက္ကူအတွင်းရှိရေမော်လီကျူး၏မညီမညာဖြစ်နေသောဖြန့်ဖြူးစေနိုင်သည်, နှင့်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု ...
8th နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း,မတ်လသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့သာမကကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လည်းဖြစ်သည်။ ဒီမှာ Guangzhou Ouhai ထုပ်ပိုးခြင်း, အရာကုမ္ပဏီလှပသောလက်ဆောင်သေတ္တာများစိတ်ကြိုက်အထူးပြုသည်,ထိုကဲ့သို့သောထုံးစံအလှကုန် box ကိုအဖြစ်,အမျိုးသမီးများအတွက်လက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာ,ဦး ထုပ်ပန်းပွင့်သေတ္တာများ ... ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမျိုးသမီးအားလုံးပျော်ရွှင်။ လှပစေလိုသည်! အမျိုးသမီးများသည်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်။ ခွန်အားကြီးသူများ
ဝိုင်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်. ပြင်သစ်သည်၎င်း၏အနီရောင်ဝိုင်အဖြစ်ကျော်ကြားသည်,ဂျာမနီကဘီယာအဖြစ်ကျော်ကြားသည်,တရုတ်သည်၎င်း၏စိတ်ဓာတ်အဖြစ်ကျော်ကြားသည်,ဂျပန်သည်၎င်း၏အတွက်ကြောင့်ကျော်ကြားသည် ... အခြားသောကျော်ကြားသောဝိုင်များလည်းရှိသည်:ဘရန်ဒီ, ဝီစကီ , ဗော့ဒ်ကာအရက်,ဂျင်, ရမ်အရက်,ထကွီလာ. သို့သော်အားလုံးတွင်တူညီသောလက္ခဏာရှိသည်: ထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်သည်
ဒီနေ့, စက်ရုပ်များနှင့်စက်များပေါ်တွင်မူတည်သော်လည်းအမှန်တရားကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းမရှိသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာများမှာလက်ဖြင့်ထုပ်ပိုးသည့်လမ်းကြောင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိနေသေးသည်။. ဇိမ်ခံလက်ဆောင်ထုပ်ပိုးအများစုသည်၎င်း၏တန်ဖိုးအတွက်လက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်. အဘယ်ကြောင့်လက်ဖြင့်ထုပ်ပိုးသေတ္တာများစက်ဖြင့်လုပ်သောထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ကြသည်? အလွယ်တကူအာရုံကိုဆုပ်ကိုင် ...
တစ်ခုခုဆင်နွှဲရန်,ဝိုင်လိုအပ်တယ်. ဒါကြောင့်လက်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့ဝိုင်ပုလင်းတစ်လုံးယူလာခြင်းသည်လူကြိုက်များသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်. စပျစ်ရည်ကိုပေးသွင်းအဖြစ်,ခရစ္စမတ်နေ့ (သို့မဟုတ်) နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်စပျစ်ရည်လက်ဆောင်သေတ္တာပုံစံအသစ်များအကြောင်းစဉ်းစားနိုင်သည်,ဝိုင်…
အဝတ်အစားလက်ဆောင်သေတ္တာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာသိသင့်သနည်း?
Apparel လက်ဆောင်သေတ္တာများကိုရည်ညွှန်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာသိသင့်သနည်း? ၎င်းတို့ကိုအဝတ်အစားများကဲ့သို့ကွဲပြားသောပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်သင်သုံးနိုင်သည့်အသုံးအ ၀ င်ဆုံးထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူသည်, လည်ပင်း, ဖက်ရှင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရှပ်အင်္ကျီများ, ဆောင်းရာသီဖုံးနှင့်အခြားပစ္စည်းများ. သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: ပုံမှန်အားဖြင့်အ ၀ တ်အထည်ကိုလက်ဆောင်သေတ္တာများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်။ …
ရေမွှေးသည်အလှကုန်များအကြားတွင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်. ရေမွှေးသေတ္တာများကိုပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ရရှိနိုင်သည်, စတိုင်များ, နှင့်ရေမွှေးကိုပိုမိုတန်ဖိုးရှိသောစေရန်အရောင်များ. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတူတဲ့ရေမွှေးပုလင်းတွေမှာသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေအတွက်ပုံသဏ္differentာန်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ရေမွှေးရောင်းဝယ်ရေးအတွက်စိတ်ကြိုက်ရေမွှေးသေတ္တာများကိုမှာယူကြသည်. သို့သော်, ဟိုမှာ…
ခရစ္စမတ်သည်ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျင်းပသောအားလပ်ရက်ဖြစ်သည် 25. ၎င်းသည်ကမ္ဘာချီယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. နှစ်ထောင်စုနှစ်ဘို့, ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူများသည်ဘာသာရေးနှင့်လောကရေးရာများဖြစ်သောဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများကိုလိုက်နာစောင့်ကြည့်နေကြသည်. ခရစ်ယာန်များခရစ်စမတ်နေ့ကိုယေရှု၏မွေးနေ့အဖြစ်ကျင်းပကြသည်။
ထုပ်ပိုးထားသည့်ပစ္စည်းများသည်ဖောက်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးထုတ်ကုန် valueGift ကိုမြှင့်တင်ပါလိမ့်မည်
လှပသော, အရာဝတ္ထုထုပ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့ကြည့်, ပစ္စည်း၏အပြင်ဘက်သေတ္တာကိုအလှဆင်။ ပြန်ဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်။ လက်ဆောင်သေတ္တာသည်လက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆွေမျိုးများနှင့်မိတ်ဆွေများကိုလက်ဆောင်များပေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလက်ဆောင်ထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။, နှင့်၏လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကိုတစ် ဦး extension ကိုဖြစ်ပါတယ် ...
ဇိမ်ခံတင်းကြပ် Box ကို
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမယ်, manual box ကိုလည်း paste carton လို့ခေါ်တယ်. ၎င်းသည်အလွှာဘုတ်၏ကော်ကပ်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်  veneer ပစ္စည်းနှင့်အတူ. ပုံသွင်းပြီးနောက်, ဒါကြောင့်မရှိတော့ပြားချပ်ချပ်ပုံသဏ္intoာန်သို့ခေါက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သာပုံသေသေတ္တာထဲမှာ. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုရိုက်ပါ, ဒါကြောင့်လည်းပုံသေသေတ္တာအဖြစ်လူသိများသည်. ဤပုံးတွင်အသုံးပြုသောအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်သည်, ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတော်လေးမြောက်မြားစွာဖြစ်ပါတယ်, ဖွဲ့စည်းပုံရှုပ်ထွေးသည်, နှင့်လက်လုပ်ထုတ်လုပ်မှုအဓိကတစ်ခုဖြစ်သည်. ထုတ်လုပ်မှုသံသရာအတော်လေးရှည်လျားသည်, တန်းနှင့်စျေးနှုန်းအတော်လေးမြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်. ထို့ကြောင့်, အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှု၌တည်၏, လူအများအပြားကဒီစက္ကူသေတ္တာအမျိုးအစားကို 'a' လို့ခေါ်တယ် "လက်ဆောင်သေတ္တာ", က "hardcover box", နှင့်တူသော. ပစ္စည်းအလွှာသည်ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းသောကတ်ထူပြားကိုအဓိကအသုံးပြုသည်, ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောမြက် paperboard အဖြစ်, အစားအစာအတွက်တင်းကျပ်သောကတ်ထူပြားနှင့်နှစ်ဖက်နှစ်ဖက် heterochromatic ကတ်ထူပြား, ဖိုက်ဘာ, စသည်တို့, နှင့်အထူများသောအားဖြင့် 1-3mm ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနံရံ doubleadhesive စက္ကူနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ကြေးနီစက္ကူ, coated အဖြူရောင်စက္ကူသို့မဟုတ်အဖြူမြှောင်းပုံစက္ကူ, ပလပ်စတစ်, ရေမြှုပ်နှင့်ဒါ. veneer ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကျယ်ပြန့်သည်, ကြေးနီစက္ကူရှိပါတယ်, တုပသားရေစက္ကူ, စက္ကူ flocking, အထူးစက္ကူနှင့်အထည်အမျိုးမျိုးတို့ကို, ကြွေ, သားရေ, သတ္တုပါးနှင့်ဒါ. veneer ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, နှင့် lithography, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း, ပုံနှိပ် bronzing, စသည်တို့. ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်သီးခြားစီကိုသုံးနိုင်သည်. ထောင့်ထောင့်အားဖြည့်ခြင်းကိုတိပ်ကဲ့သို့သောနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်, စက္ကူ, အထည်, နှင့် like.Common စားသုံးဆီအဖြူစုတ်ဖြစ်ကြသည်, ဓာတ်ဆီ, စုတ်တံ, စသည်တို့. အဖြစ်များသည်…
123နောက်>...21 စာမျက်နှာ 1 ၏ 21